အဘိဓမ္မာဟူသည် အလွန်သိမ်မွေ့နူးညံ့သောဓမ္မ၊ အလွန်နက်နဲခက်ခဲသောဓမ္မ၊ အလွန်ကျယ်ပြန့်သောဓမ္မ၊ အလွန် ထူးကဲသောဓမ္မဖြစ်သည်။ ဓမ္မဟူသည် အရှိတရား၊ အမှန်တရား၊ ကြောင်းကျိုးဆက်တရား၊ သဘာဝတရား၊ ပကတိတရား၊ ဉေယျတရား၊ နိဿတ္တတရား၊ နိယာမတရား၊ ပရမတ္ထတရား၊ သစ္စာတရားတို့ဖြစ်သည်။ အလွန့် အလွန် သိမ်မေ့နူးညံ့သော၊ ခက်ခဲနက်နဲသော၊ ထူးကဲကျယ်ပြန့်သော၊ သတ္တ အတ္တ မဟုတ်သော ပင်ကိုယ်သဘာဝအားဖြင့် အရှိအမှန်ဖြစ်သော သိအပ်သော ထိုအဘိဓမ္မာကို မြတ်ဗုဒ္ဓသည် နတ်ပြည်၌ ဟောခဲ့သည်။
လူဖြစ်စေ ရဟန်းဖြစ်စေ တစ်ခါတစ်ရံ မိမိတို့၏ တစ်နေ့တာ အချိန်များကို စာဖတ်ခြင်း၊ စာရေးခြင်း၊ တရားနာခြင်း၊ တရားဟောခြင်း၊ စာသင်ခြင်း၊ စာချခြင်းများဖြင့် ကုန်သွားတတ်သည့် အခါများ ရှိတတ်၏။ အထူးသဖြင့် ရဟန်းတော်များသည် နေ့စဉ် စာသင်စာချ၊ တရားဟော၊ တရားပြ အလုပ်များဖြင့် တစ်နေ့တာ အချိန်များကို ကုန်လွန်စေတတ်သည်ကို သတိပြုမိ၏။
( ၇ ) ရာဇာရတနသတ္တာဟ -
ဘုရားရှင်သည် ကျည်းပင်ရင်း၌ ( ၇ ) ရက်စံနေတော်မူပြီးနောက် မဟာဗောဓိပင်၏
တောင်ဘက်အလံ ( ၅၀ ) အကွာ၌ ရှိသော လင်းလွန်းပင်ရင်းသို့ ကြွရောက်ကာ ( ၇ )
ရက်ပတ်လုံး ၀ိမုတ္တိချမ်းသာ ၊ ဖလသမာပတ်ချမ်းသာကို ခံစားလျက် သီတင်းသုံးတော်မူခဲ့သည်။
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 6:35 AM No comments:
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 6:34 AM No comments:
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 6:33 AM No comments:
လောကဓံ တရားနှင့် ကြုံလာရင်.
လောက၌ တစ်ရာတန်ပစ္စည်းကို လိုလျှင်တစ်ရာကျပ်,တစ်ထောင်တန်ပစ္စည်းကိုလိုလျှင်
တစ်ထောင်ကျပ်>> စသောအားဖြင့် တန်ရာတန်ကြေးပေးယူမှ မိမိ လိုအပ်သောပစ္စည်းကို
ရနိုင်သကဲ့သို့ ဆုတောင်းရာ၌လည်းတောင်းသောဆုနှင့်တန်အောင် ကုသိုလ်
ကောင်းမှုကိုပြုမှ(ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြေးကိုပြုပေးမှ)လိုအပ်သော အရာကို လိုအပ်သလောက်
ရနိုင်ပေမည်။ငွေတစ်ပြား ပေးရုံမျှဖြင့် တစ်သိန်းတန် ရွှေဖလားကို မရနိုင်သကဲ့သို့ မတောက်
တခေါက် ကောင်းမှု ကုသိုလ်လေးပြုရုံမျှဖြင့်လည်းလိုအပ်သမျှ ဆုတွေတပုံကြီးတောင်းယူ၍
ရိပ်သာမှာ တံမြက်စည်း လှည်းနေရင်း အတွေးတစ်ခု ကြောင့် ဘာသာ ပြုံးလိုက်မိပါတယ်။ မိမိရဲ့ အပြုံးကို အနားက ဖြတ်သွားတဲ့ သူငယ်ချင်းက မြင်ဖြစ်အောင် မြင်သွားတော့ “ဘာပြုံးတာလဲ” တဲ့။ မိမိကလည်း “ဘာမှ မဟုတ်ပါဘူးလို.” ပြုံးပြီး ပြန်ပြော လိုက်ရပါတယ်။ ဒီတော့ သူငယ်ချင်း ဖြစ်သူက “စာရေးဆရာရယ်လို့ မပြောရဘူး၊ တော်တော် စိတ်ကူးယဉ်” လို.ပြောပြီး ရှေ.ဆက်လျှောက် သွားပါတယ်။ တကယ်တော့ မိမိ ပြုံးရခြင်း ရဲ့ အကြောင်းမှာ အဖြေက သီးသန်. ရှိပြီးသားပါ။ သူငယ်ချင်းကို ပြောမပြ ဖြစ်ခဲ့ ပေမဲ့ ချစ်တဲ့ စာဖတ် ပရိသတ်ကိုတော့ တကူးတက ကိုပြောပြ ချင်ပါတယ်။